ODUU RDH Adoolessa 4 2010 :Fi Komii Jiilla Hawaasa Booranaa Finfinee jiru – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioODUU RDH Adoolessa 4 2010 :Fi Komii Jiilla Hawaasa Booranaa Finfinee jiru
ODUU RDH Adoolessa 4 2010 :Fi Komii Jiilla Hawaasa Booranaa Finfinee jiru
ODUU RDH Adoolessa 4 2010 : Fi Komii Jiilla Hawaasa Booranaa Finfinee jiru
Dhaamsa Hogantootta Mooyyallee:Mootummaan Naannoo fi Fedeeaalaa Rakkoo Nageenyaa Humni Liyyuu Haylii Soomaalee Uummata Booranaa Irratti Raawwachaa Jiraniif furmaata akka kennan Inispeekter Musee Poolisii magaalaa Mooyaaleefi obbo Nigaatuun hoogganaa Bulchiinsaa fi nageenya Mooyaalee Mooyaalee irra dhaamsa kalattii Raadiyoo Daandii Haqaatin dabarsan.
Rakkoon kun rakkoo waggoottan dheeraaf ture ibsuun hawaasni Oromoo guyyaa guyyaan lubbuu isaa dhabaa, qaamaa hirdhachaa jiraachuu ibsuun, Mootummaan hatattamaan furmaata akka itti kennu gaafachuun, Uummanni keenya hanga furmaatni argamutti tokkummaan walqabachuun qabsaa’uu akka qaban dhaamsa dabarsaniiru.
Mootummaan Federaalaas tahe kan naannoo wayita uummanni humnoota liyyuu haylii naannoo soomaaleen waggaa guutuu rukkutamu ilaalaa fi dhagahaa furmaata itti kennuu dhabuun isaanii uummata keessatti gaaffii guddaa kaasee kan jiru yommuu tahu, hammas kallattiin furmaataa mootummaa harka waan taheef rakkoo kanaaf furmaata waaraa yoo hin kennine balaan kana irra hamaa tahe dhufaa jiraachuu ibsuun, uummatichi iyataa jira.
Abdii Illeen Taayitaa Irraa Kaafamuun Naannicha Keessatti Bulchiinsi gaarii akka dhufuuf iyyachuuf Jiilli tokko naannoo Soomaalee irraa ka’uun Magaalaa Finfinnee keessa akka jiran beekame.
Jaarooliin, hooggantoonni gosaafi siyaasaa Naannoo Soomaalee keessatti dhabamuu bulchiinsa gaarii fi haqaa hadheeffanneerra jechuun iyyata isaanii Mootummaa Federaalaatti dhageessifachuuf Finfinnee akka jiran himame.
Miseensoonni jiila kanaa Perezidaantiin naannichaa Abdii Illeen abbaa irree dha jechuun naannicha keessatti yaada kee ibsachuu fi mormuun akkaan jabaataa waan taheef jijjiirama badbaadna jechuun dubbatu.
Dabalataanis nama biyya keessa jiru miti namni biyya alaa jirullee yoo Abdii Illee morme, Abdii Illeen maatii fi finna isaa irratti dararaa suukkanneessaa akka raawwatu ibsuun, jiilli kun iyyannoo isaanii Waajjira Muummicha Ministeeraaf, Abbaa Alangaa Waliigalaaf, Raayyaa ittisaa fi Koomishinii mirga namoomaa Itiyoophiyaaf akka galchatan gabaafameera.
Bakka bu’aa jiilichaa kan tahe obbo Ugaaz Abdullaahi “kutaalee biyyattii keessatti hidhamtoonni hiikamaa jiranis, naannoo soomaaleetti garuu mannee hidhaa hidhamtootaan guutamaniiru” jedhu.
Dhimma hidhamtoota hikuu irratti Prezidaantiin naannichaa Abdii Illeen mana hidhaa guddicha ogaaden cufuun yeroo dhihoo keessatti gara Masjiidaatti jijjiiruuf akka dubbate himameera.
#RDH Adoolessa 04 2010
“Qabsoo fi siyaasaa adda baasanii beekun barbaachisaa dha. Ijoolleen OPDO siyaasaa malee, qabsoo hin beekan. Waa’ee qabsoo isaan barsiisuuf yaalamee ture. Qormaata otuu hin taa’iin kufanii hafan. Nama haa baasu!!”
Nu ajjeeftanis, qaama nu hir’iftanis, kaayyoo keenya nu keessaa buqqisuu hin dandeessan.
Barreessaan Jawar Mohammed
Sagalee: Osman Abdulatif